ညီလင်းသစ်: သူမ, လိုချင်တဲ့ မွေးနေ့လက်ဆောင်
Posted by ညီလင်းသစ် au 19.6.12
(... တစ်လျှောက်လုံးမှာ မျဉ်းကွေးတွေက အနားသတ်ဖို့ အကြိမ်ကြိမ် ကြိုးစားတာ ခံရပေမယ့် အဲဒီဆေးရောင်စုံ အစွန်းအထင်းတွေနဲ့ပဲ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ တန်ဖိုးကြီး ပန်းချီကား တစ်ချပ် ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ ကင်းဗတ်စ တစ်ခုပါ...) ရေးတတ်လိုက်တာဗျာ...။
အန်တီစုရဲ့ မွေးနေ့ ဆုတောင်း အလျင်အမြန်ဆုံး ပြည့်ဝပါစေ..လို့ ကိုညီလင်းသစ်ရဲ့ တောင်းဆုနဲ့အတူ ထပ်ဆင့် ဆန္ဒပြုပါတယ်။
စကားလုံးတွေထဲမှာ စေတနာတွေ မေတ္တာတွေကို မြင်နေရတယ်... ကိုညီလင်းလိုပဲ ထပ်တူ ဆုတောင်းနေပါတယ်...
ပြီးပြည့်စုံတဲ့ စိတ်စေတနာနဲ့ ကိုညီလင်းရဲ့ ပို့စ်လေးဟာ အန်တီအတွက် မွေးနေ့လက်ဆောင်လေးပါပဲ...။
ညီလင်းတော့အဲနေရာကို ရောက်နေလောက်ပြီလို့ တွေးမိသေးတယ် .. အန်တီ့ရဲ့ အဲခရီးစဉ်စစချင်းတုန်းက ပုံတွေစာတွေဖတ်ပြီး မျက်ရည်ဝိုင်းနေခဲ့သေးတာ ...
အင်တာဗျူးလင့်ခ်အတွက် ကျေးဇူးအထူးပါ ကိုညီလင်းသစ်ရေ။
အမေစုအတွက် ထပ်တူထပ်မျှ ခံစားဆုတောင်းပေးနေပါတယ်။
"Le Bonheur Pour Mon Pays!" Thank you so much for sharing the link, and I am deeply touched when she mentioned, "ce n'etait pas un sacrifice, c'etait un choix". Comme elle est belle et modeste.
ကိုညီရေ အဲ့ဒီနေ့ တွေမှာ ကျမစိတ်ထဲမှာ အန်တီ့ ကို
ကျမနဲ့ သူ နီးနီးနားနားရှိနေတဲ့ ခံစားမှု က ထူးခြားပါတယ်။ ဒီနေ့ မနက်မိုးလင်းတော့ သူ့ မွေးနေ့ 
မှာ ဘာတွေလုပ်နေမလဲ လို့ တွေးမိသေးတယ်။
ကိုညီလင်းသစ်ပို့စ်လေး ဖတ်ပြီး အမေစုကို ပိုပြီး ချစ်ခင်မြတ်နိုးစိတ်တွေ ပေါ်ပေါက်လာရတယ်.
ကျွန်တော်လည်း သူ့အတွက် မွေးနေ့ပို့စ်လေးရေးမယ် စိတ်ကူထားပေမယ့် လောလောဆယ်တော့ သူများတွေရေးတာတွေကိုပဲ လိုက်ဖတ်နေမိတော့တယ်...
ရှားရှားပါးပါး သူ့မိသားစုလေးနဲ့ ဆုံတွေ့ခွင့်ရခိုက် ပျော်ရွှင်စရာ မွေးနေ့ပွဲလေး ဆင်နွှဲနိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်...
အဲဒီကိုရောက်နေခဲ့ပြီးဓါတ်ပုံတွေတင်လာမလားလို့ တွေးနေမိခဲ့တာ။ ကျက်သရေရှိတဲ့အလှပိုင်ရှင်ကိုကိုညီလင်းသစ်လက်ရာနဲ့ သာကြည့်လိုက်ရရင်ဆုိုပြီးကြိတ်မျှော်လင့်ထားလိုက်သေးတယ်။း)
ဂုဏ်မြင့်တန်ဘိုးမြင့်တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုကျမရဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ ပြည့်စုံအောင်မှီအောင်ပြောနုိုင်မယ်မထင်ပါဘူး။ စကားလုံးတွေနဲ့ သူ့ ကိုဖေါ်ညွှန်းရတာမမှီပါဘူး။ ရင်ထဲအသည်းထဲကနေပဲသူဟာဘယ်လိုမျိုးဆိုတာကိုခံစားလို့ ရမိပါတယ်။ သူမစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာဘို့ ဘုရားရှစ်ခုိုးပြီးတုိုင်းမေတ္တာပို့ တာတော့ကျမတတ်နိုင်တော့အမြဲမေတ္တာပို့ ပါတယ်။
အန်တီစုလိုမျိုး .. မြန်မာအမျိုးသမီးထဲမှာ၊ မြန်မာ လူထုထဲမှာ နောက်တယောက်ပေါ်လာဖို.ဆိုတာ .....တွေးမိလိုက်တိုင်း အန်တီစုကို ဒီ.ထက်ပိုပြီး အသက်မကြီးစေချင်တော.ဘူး။
ဘယ်လိုဖြစ်လို. စိတ်ဓာတ်အဲ.လောက်ခိုင်မာတာလဲဆိုတာလဲ ခဏခဏတွေးဖြစ်တယ်။
သိပ်ကိုဂုဏ်ယူမိပါတယ်....အန်တီစုကို တကမ္ဘာလုံးက စိတ်ဝင်စားလေးစားကြရတာဒီခရီးစဉ်က သက်သေပါဘဲ...
ဒါဆို ညီက အစ်ကို့ထပ် နည်းနည်းကံကောင်းသွားတာပေါ့ဗျ မဲဆောက်ကိုလာတုန်းက အမေ့ကို စက္ကန့်ပိုင်းလေးတွေ့လိုက်ရတယ် အသက် ၆၀ ကျော်အမျိုးသမီးကြီးတစ်ယောက်က နုပျိုပြီး အားမာန်တွေပြည့်နေတယ်လို့ ခံစားလိုက်ရတယ် ကြက်သီးတွေထပြီး မျက်ရည်တွေ အလိုလိုဝဲလို့ ဘယ်လို ခံစားမှုမှန်းမသိလိုက်ဘူးဗျ သိပ်ကြည်နူးတယ်း)
အမေဟာ ကျနော်တို့ကို အမြဲတမ်း ခွန်းအားတွေပြည့်နေစေတဲ့ ပန်းချီကားတစ်ချပ်ပါပဲ အမေ ကျန်းမာပါစေ ။
အမေစုကို ချစ်မြတ်နိုးစိတ်၊ လေးစားစိတ်၊ ကြည်နူးစိတ်နဲ့ မျက်ရည်များတောင် လည်မိပါရဲ့။
ပေးဆပ်စွန့်လွှတ်နိုင်သူတစ်ဦးဖြစ်သလို၊ ယုံကြည်ချက်ကို မသွေဖီတဲ့ ခိုင်မာတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို မလေးစား၊ မကြည်ညိုပဲ မနေနိုင်ပါဘူးရှင်...။
အမေစု လျှောက်လှမ်းတဲ့ ခရီးတိုင်းမှာ ခလုပ်မထိဆူးမငြိပဲ ကျန်းမာချမ်းသာစွာ လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေ...။
ခေါင်းစဉ်ကို စဖတ်လိုက်တော့ အမေစုအတွက်လို့မထင်မိ
ဘူးဗျ။မနေ့ကသူ့မွေးနေ့ဆိုတာသိပေမယ့် အကို သူ့အတွက်ရေးလိမ့်မယ်မထင်မိတာအမှန်ပါပဲဗျ။ဖတ်မိသ
မျှ အမေစုအတွက်မွေးနေ့ဆုတောင်းတွေထဲမှာ ရိုးရိုးရှင်း
ရှင်းနဲ့ စိတ်ခံစားသမျှကို ချပြသွားတဲ့ ဒီပို့စ်လေးကို
လေးစားအားကျတဲ့အမျိုးသမီးကြီးတစ်ယောက်ရဲ့အောင်မြင်မှု့တွေကို မြန်မာဆန်လှတဲ့ ကျက်သရေရှိမှု့တွေကို ၀မ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်အကိုရယ် ..
သောကတွေနဲ့မို့ ဘာကိုမှ မသိနိုင်အောင်ပါပဲ
ကိုညီလင်းသစ်ရေးခြစ်ထားတဲ့ အမေစုအတွက် စာတစ်ပုဒ် (မွေးနေ့လက်ဆောင်)ကလည်း နွေးထွေးလှပလိုက်တာ။
အားလုံးရေးထားသလိုပဲ အမေပြောနေတာတွေကို ငေးပဲကြည့်နေမိတော့တယ်။ သူ့လိုမေတ္တာစိတ်ပြည့်ဝဖို့၊ အနစ်နာခံဖို့၊ ထူးချွန်ထက်မြက်ဖို့ ကြိုးစားချင်စိတ်တွေပေါက်လာစေတဲ့ ရှေ့ဆောင်လမ်းပြ အမေတစ်ယောက်ပါဗျာ။
အရင်နေ့က ဒီအင်တာဗျုးအကြောင်း ဖတ်ခဲ့ဖူးပေမဲ့ ကိုညီလင်းသစ်ရေးထားတာ ဖတ်ပြီး မျက်ရည်တောင် ဝဲသွားမိတယ်။ ရေးတတ်လိုက်တာ..
ကိုညီလင်းသစ်ရဲ့သူမအပေါ်ထားတဲ့ ချစ်ခင်လေးစားမှုတွေကိုလည်း အတိုင်းသားဘဲ တွေ့လိုက်ရတယ်။ ကျွန်မတို့အားလုံးက ချစ်ရတဲ့သူမပါ။
ကိုညီလင်းသစ် နဲ့ အတူ ဆုတောင်း ပါတယ် အမေ တယောက် ကျန်းမာစွာနဲ့ အသက်ရာကျော် ရှည်ပါစေ
ကိုညီလိုပဲ အမေစုအတွက် မွေးနေ့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်..အမေစု ကျန်းမာပါစေ..